33% yevasina kubayiwa majekiseni eAmerica vanoti havazombobaiwa jekiseni
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » 33% yevasina kubayiwa majekiseni eAmerica vanoti havazombobaiwa jekiseni
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • Kodzero Dzevanhu • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Vanhu vari kuUK vane mukana wakapetwa kaviri wekubaiwa jekiseni sevanhu vari muUS.
MaAmerican zvakapetwa kaviri kuti vangadai vasina kutambira jabhu rimwe chete kune vamwe vavo vekuUK.
39% yevaAmerican havazobayiwa jekiseni nekuti ivo 'havavimbe nehurumende'.
Hurumende yeUS ine rwendo rwakakomba kumberi mukugonesa maAmerican kuti vabaye jekiseni.
Iyo data uye zvakawanikwa kubva kuongororo yazvino pamusoro pekuzeza kwekudzivirira muUnited States neUnited Kingdom zvaburitswa nhasi, zvichiratidza kuti hurumende yeUS ine rwendo rwakakomba kumberi mukugonesa vagari vayo nezve kukosha kwekubaiwa jekiseni.
Ongororo iyi yakaitwa kubva Nyamavhuvhu 5, 2021 kusvika Nyamavhuvhu 17, 2021 uye yakabvunzwa vangangoita zviuru zvishanu muUnited States uye chiuru chevatori vechikamu muUnited Kingdom. Iyo data yakaunganidzwa ichishandisa nzira nyowani yekubhadhara vashandisi vema smartphone sevashandi ve "gig" yekutora chikamu kwavo uye zvakakonzera mhinduro dzakakura muzviuru kusvika parinhasi nekuuya kuzhinji.
Mhedzisiro yacho yakaratidza misiyano yakakosha pakati pevanhu vasina kuvharirwa muUS neUK uye inoratidza huwandu hwakasiyana hwekurwisa kubayiwa. Ongororo iyi inoratidza zvakare kuvhurika kunokwanisika kushandiswa kukurudzira vasina kuvharirwa kuti vabaiwe jekiseni.
Heano zvimwe zvezvakakosha zvakawanikwa kubva kuongororo:
Vanhu vekuAmerican vaive nemukana wakapetwa kaviri wekusatambira kana imwe chete mushonga weCCVID-19 (45%) kupfuura vamwe vavo vekuUK (23%).
33% yevasina kubayiwa majekiseni eAmerica uye 23% yevasina kubayiwa vagari vemuUK vakati havafi vakabaiwa jekiseni.
Pakati peavo vasina kubayiwa nhomba, 39% yevaAmerican uye 33% yevatori vechikamu vekuUK vakati havazobayiwa nhomba nekuti havavimbe nehurumende.
Pakati peavo vasina kubayiwa nhomba, 46% yevatori vechikamu vekuUK vakati vanozobayiwa jekiseni kana paine humwe humbowo majekiseni aya akashanda zvichienzaniswa ne21% chete yevaAmerica vasina kubayiwa.
Vane 7% chete vevatori vechikamu vemuAmerican vasina kubayiwa vakataura kuti havasi kubayiwa jekiseni nekuti havafungi kuti COVID yaive njodzi chaiyo, asi makumi matatu kubva muzana evasina kubatwa neshavi vekuUK vakanyora izvo sekufunga kwavo.
Izvi zvakawanikwa zvinoratidza kuti vakuru vehutano muUS neUK vanosangana nematambudziko akasarudzika mukugonesa vanhu vavo vasina kuvharirwa kuti vawane Covid-19 mushonga. Iine 69% yeUK isina kuvharirwa vanhu vanoda kubayiwa jekiseni kana vagamuchira ruzivo rwakawanda pakuyedzwa, kuchengetedzeka, kana kushanda (zvichienzaniswa ne49% chete yevaAmerica vasina kubayiwa), nzira inoenda kune vanoita mutemo vekuUK inoratidzika zvakanyanya. Vagadziri vemitemo veUS, kune rimwe divi, vanofanirwa kukwikwidzana nezvikamu zvakakura zvevagari vakataura kuti havazombobayiwa nhomba uye havazozviita nekuti havavimbe nehurumende.